Kuguma kwenyika kuchazovei maererano nebhaibheri Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kuguma kwenyika kuchazovei sezviri maererano nebhaibheri
Kuguma kwenyika kuchazovei sezviri maererano nebhaibheri. Kuguma kwenyika ichave nguva ya kuparadzwa nekutongwa, asiwo a nguva yetariro kune avo vanoda Jesu. Kune zviporofita zvakawanda mubhaibheri nezvekuti magumo enyika achange akaita sei, asi hatizonzwisise zvese kusvika zvaitika. Mutendi haafanire kutya kuguma kwenyika.
Kuguma kwenyika kusati kwaitika, zvinhu zvakati kuti zvichaitika:
Njodzi dzinongoitika dzoga
Izvi ndizvo zvimwe zvezviratidzo zvekuti mugumo wave pedyo. Mushure mezviitiko izvi kuchauya iyo kuguma kwenyika.
1 Kuguma kwenyika kuchazovei sezviri maererano nebhaibheri
1.1 1. Kuuya kwaJesu
1.2 2. Hondo yekupedzisira
1.3 3. Kuparara kwenyika
1.4 4. Kumuka kuvakafa nekutongwa kwekupedzisira
1.5 5. Matenga matsva nepasi idzva
Zvekare zvekare uye Testamente Itsva Vanotaura nezve zvimwe zviitiko zvichaitika kumagumo enyika:
1. Kuuya kwaJesu
Pakupera kwenyika, Jesu achadzokera ku kuunza kutonga, simbisa kururamisira, uye tora vatsvene vaende kudenga. Kuuya kwaJesu ndicho chiitiko chikuru icho Inoratidza kuguma kwenyika here. Tariro huru yemutendi wese ndeyekuti hatina kusiiwa; nerimwe zuva Jesu achadzoka kuzotitora kuenda kudenga.
Ipapo chiratidzo choMwanakomana woMunhu chichaonekwa kudenga. zvino marudzi ose enyika achachema, uye achaona Mwanakomana wemunhu achiuya pamusoro pemakore edenga, nesimba nekubwinya kukuru.
Uye achatuma vatumwa vake nekurira kukuru kwehwamanda, uye vachaunganidza vasanangurwa vake kubva kumhepo ina, kubva kumugumo wedenga kusvikira kuno mumwe.
2. Hondo yekupedzisira
zvose Vavengi vaMwari vachabatana kuti varwe Naye nevatsvene. Vavengi vachawanda, asi Mwari achavakunda. Richava zuva rekukunda kukuru kwevanhu vaMwari.
Zvino ndakaona chikara, madzimambo enyika nemauto avo, vakaungana kuzorwa nemutasvi webhiza nehondo yake.
Uye chikara chakabatwa, pamwe nemuporofita wenhema wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakanyengera nazvo avo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, vakanamata mufananidzo wacho. Vaviri ava vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto unopfuta nesarufa.
Vamwe vese vakaurayiwa nebakatwa raibuda mumuromo weiye akatasva bhiza, uye shiri dzese dzakaguta nenyama yadzo.
Apocalipsis 19: 19-21
3. Kuparara kwenyika
Mwari achaparadza nyika yakazara nemoto. Iri richava zuva rekutongwa nemurango wechivi chakasvibisa nyika. Zvese zvisina kukwana zvichaparadzwa.
Asi zuva raIshe richauya sembavha usiku; mairi matenga achapfuura neruzha rukuru, uye zvinhu zvinopisa zvichaparadzwa, nenyika nemabasa ari mairi achapiswa.
2 Petro 3: 10
4. Kumuka kuvakafa nekutongwa kwekupedzisira
Kumuka uye kutongwa yokupedzisira
Vakafa vese vachamutswa, vamwe kutongwa, vamwe kuupenyu husingaperi. Zvese zvichaunzwa pamberi paMwari uye chero munhu ane zita rake rakanyorwa mubhuku rehupenyu achaenda kudenga, asi vakatukwa vachakandwa mudziva remoto, pamwe chete dhiabhori nengirozi dzake, kutambura kuparadzwa kusingaperi.
Uye vazhinji veavo vakarara muguruva revhu vachamutswa, vamwe kuupenyu husingaperi, uye vamwe kurunyararo nekusingaperi.
Dhanieri 12: 2
5. Matenga matsva nepasi idzva
Matenga matsva nepasi idzva
Pakupedzisira Mwari achadzoreredza zvinhu zvese, achigadzira nyika izere nehuvepo hwake, asina zvivi kana kutambura. Vese vakaponeswa vanogashira miviri mitsva isingaori uye vachararama nokusingaperi naMwari.
Zvino ndakanzwa inzwi guru richibva kudenga, richiti: Tarira, tende raMwari nevanhu, uye uchagara navo; ivo vachava vanhu vake, naMwari amene uchava navo ave Mwari wavo.
Mwari achapukuta misodzi yose pameso avo; nerufu haruchazovipo, nekuchema, nekuchema, nekurwadziwa; nekuti zvinhu zvekutanga zvakaitika.
Zvakazarurwa 21: 3-4
Zviitiko zvese izvi zvichaitika kumagumo epasi, asi hapana anoziva zvechokwadi kana kana chaiyo nhevedzano yezviitiko. Ichi ndicho chakavanzika chinozivikanwa naMwari chete. Asi Mwari vakatonyevera kuti rimwe zuva zvichaitika, saka tinofanira kunge takagadzirira. Nzira yakanakisa yekugadzirira ndeye kurarama nenzira kwayo. Hatifanire kutya, nekuti kuguma kwenyika kuchaunza mufaro usingaperi kune vakaponeswa.
Asi tinovimba, sezvaakavimbisa, denga idzva nenyika itsva, maanogara Kururamisira.
Naizvozvo, vadiwa, makamirira zvinhu izvi, shingairai kuti muwanikwe naye murugare uye musina chamunopomerwa.
Petro 3: 13-14
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba ichi chinyorwa chipfupi chinokubatsira kuti unzwisise kuguma kwenyika kuchazovei maererano nebhaibheri. Kana iwe uchifarira kuenderera kudzidza pamusoro pemifungo yebhaibheri, tinokusiira chinyorwa chinotsanangura Mhando dzipi dzekutsanya dziripo muBhaibheri?.